နစေ့ဉျ ရုပျ/သံအစီအစဉျ (နိုငျငံတကာ) | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS) | Page 23
Home အစီအစဉျမြား နစေ့ဉျ ရုပျ/သံအစီအစဉျ (နိုငျငံတကာ) Page 23
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ...
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၊ သောကြာနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=I07xtndkIuQ&feature=youtu.be ■ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ကြာသပတေးနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=R2ZXcl0gwM0&feature=youtu.be 1. တရုတ်မှာ ရင်ပြင်အတွင်း လူအုပ်ထဲ ကားနဲ့ဝင်တိုက်၊ လူ...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်၊...
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်သောကြာနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=g5fKouTQAZg&feature=youtu.be 1. ဗီယက်နမ် သမ္မတ ကျန်ဒိုင်ကွမ်...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်င်ဘာလ ၁၂ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=fpylaQK5W8k&feature=youtu.be 1.မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်က အမေရိကန် သမ္မတနဲ့ ထပ်မံတွေ့ဆုံလိုတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်တဲ့ သတင်း...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=DowRmYMGA1Q&feature=youtu.be 1. ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် ရာထူးက...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 27 ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 27 ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=q-ilqTt-Czk&feature=youtu.be 1. စစ်လေယာဉ် ပစ်ချခံရမှုအတွက် အစ္စရေးကို ရုရှား ပြစ်တင်ပြောဆိုနေတဲ့သတင်း...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ ၁၃ ရက်၊ တနင်္လာနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ ၁၃ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာသတင်း...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ...
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=T4io7cyPqHI&feature=youtu.be ■ စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို...
MCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့
မင်္ဂလာပါရှင်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်း အစီစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=9Fqnws2AXto&feature=youtu.be ● အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့သားကို Facebook...